'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा स्वदेशमै हुनुपर्छ'- फिचर - कान्तिपुर समाचार
'अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा स्वदेशमै हुनुपर्छ'
असार १८, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदै गर्दा हिसानले केही संस्थागत पहल गर्दै छ कि ? हिसान भन्नाले कक्षा ९–१२ देखि विश्वविद्यालय तहका शिक्षालयहरूको संगठन हो  ।
जहाँ निजी स्कुल तथा शिक्षालय छन्, त्यहाँ हाम्रो उपस्थिति रहन्छ । हिसान राज्यलाई सघाउ पुर्‍याउन गठन गरिएको हो । एसईई नतिजा सार्वजनिक भएसँगै शैक्षिक संस्थाको खोजीमा रहेका विद्यार्थीहरूको भर्ना प्रक्रिया सहज तथा व्यवस्थित बनाउन हिसान सदस्यहरू जुट्दै छन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई उत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने ढंगले विद्यार्थीलाई काउन्सेलिङ गर्दै छौं । हिसानको कार्यक्रम भनेकै विद्यार्थी भर्नामा सहजीकरण हो ।
विद्यार्थी काउन्सेलिङ के के पक्षमा हुन्छ ?
निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्था सबै वर्गको हो । त्यसैले गर्दा सबैखाले विद्यार्थीको पहुँच पुग्नुपर्छ भन्नेमा छौं । आर्थिक रूपमा कमजोर तर जेहेनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिलाएर पढ्ने, पढाउने वातावरण निर्माणमा ध्यान दिन्छौं । सहज ढंगले पढ्ने वातावरण निर्माण गर्ने हिसानले समन्वय गरेको छ ।
छात्रवृत्ति कति प्रतिशतले पाउँछन् ?
नीतिगत रूपमा ५ प्रतिशत हो । विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गएपछि आ–आफ्नो नीति बनेका छन् । स्पष्ट निर्देशिका छैन । तर हामी बढीभन्दा बढी विद्यार्थीलाई कसरी छात्रवृत्ति दिएर संस्था चलाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छौं । अघोषित रूपमा झन्डै २० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिंदै आएका छौं । शुल्क मापदण्ड एकरूपता नरहे पनि शैक्षिक संस्थाले धेरै किसिमका छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएका छन् । सरकारी विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति दिएर पढाइरहेका छौं ।
एसईईको नतिजाअनुसार निजी क्षेत्रको हिस्सा २९ प्रतिशत देखिन्छ । यसले के संकेत गर्छ ?
एसईईमा २९ प्रतिशत देखिनु र त्यसमा अधिकांश उच्च ग्रेड प्राप्त छन् । सरकारीको तुलनामा निजी विद्यालयको नतिजाले प्रमाणित गरेको छ ।
कक्षा १२ को नतिजाचाहिं कस्तो छ ?
निजी शैक्षिक संस्थामा कक्षा १२ पढेका विद्यार्थीको नतिजा समग्रमा ७५ प्रतिशतभन्दा माथि छ । त्यसमा विज्ञानको सबैभन्दा धेरै छ ।
निजी क्षेत्रले व्यावहारिक शिक्षा दिंदैनन् भन्छन् ?
हामी निजी क्षेत्रले अब्बल नतिजा देखाउन बल गर्छौं र समाजमा काम पनि गर्छौं । प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिन्छौं । हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू डाक्टर, इन्जिनियर बनेका छन् । अर्कोतर्फ बिदेसिने विद्यार्थीलाई स्वदेशमै शिक्षा हासिल गर्ने अवसर दिएका छौं ।
निजी क्षेत्रले बिदेसिन मात्र सिकाउँछन्, भन्छन् नि ?
विद्यार्थी बिदेसिने त साँच्चैको ठूलो रोग भएको छ । कतिपय राम्रा विश्वविद्यालय पढ्न जान्छन् । तर अधिकांशचाहिं पढाइका साथै रोजगारीकै निम्ति गएका हुन् भन्ने लाग्छ । विश्वव्यापीकरणको प्रभाव पनि हो । अब विश्व बजारलाई सम्बोधन गर्ने शिक्षा स्वदेशमै हुनुपर्छ । श्रमिक मात्रै भएर बस्ने परम्परागत शिक्षा परिमार्जन हुनुपर्छ । समय सन्दभर्अनुसार प्रत्येक वर्ष पाठ्यक्रम परिमार्जन हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : गणेश राई
उद्यमी बन्न व्यवस्थापन
जीवनमा सफल हुन ज्ञान, धन, जन, समय र वस्तुको कुशल प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । त्यो क्षमता व्यवस्थापनबाट सिक्न सकिन्छ ।
असार १८, २०७६ यज्ञ बञ्जाडे
उद्यमी बन्न चाहनुहुन्छ भने व्यवस्थापन तपाईंका लागि उपयुक्त विषय हो  । कक्षा ११ र १२ अध्ययन, अध्यापन हुनेमध्ये व्यवस्थापन त्यस्तो विषय हो, जसले जागिर मात्र होइन उद्यमी बन्नका लागि पनि आवश्यक ज्ञान दिन्छ  ।
यसको अर्थ व्यवस्थापनबाहेक विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति उद्यमी हुन सक्दैन भन्ने होइन । अन्य विषय अध्ययनको तुलनामा व्यवस्थापन विषयमा उद्यमी बन्न चाहिने धेरै शिक्षा (गुण) पाइनेचाहिँ पक्कै हो ।
धन, जन र वस्तुको कुशल प्रयोग गरी सन्तोषजनक सफलता प्राप्त गर्ने उद्देश्यतर्फ उन्मुख गराउने विषय व्यवस्थापन हो । यसले कुनै पनि विषयमा पूर्वानुमान गर्न, योजना बनाउन, संगठन, आदेश, समन्वयजस्ता मुख्य कार्यहरू गर्न सिकाउँछ । व्यवस्थापन तीन एम— म्यान, मनी र मेसिन (थ्री एम) को व्यवस्थापन मेसिन हो । सही समयमा ती तीन कुरा व्यवस्थापन गर्न जानेमा मानिस जुनसुकै काममा पनि सफल हुन्छ ।
मानिसभित्र सीप, कला, क्षमता, सोच, उत्प्रेरणा, मनोबल, दृष्टिकोण, रचनात्मकता आदि हुन्छ । भौतिक साधनभित्र मेसिन, उपकरण, प्रक्रिया, पद्धति, क्रियाकलाप आदि हुन्छ । यस्तै, वित्तीय साधनभित्र पुँजी, स्रोत, मुद्रा पर्छन् । यी सम्पूर्ण तत्त्वलाई एकीकृत गरी संगठनको लक्ष्य प्राप्तिमा उन्नमुख गराउने काम व्यवस्थापनले गर्छ ।
यसको अर्थ व्यवस्थापन व्यवस्थापन न्यूनतम स्रोत साधन र प्रयासबाट अधिकतम नतिजा प्राप्त गर्ने कला व्यवस्थापन हो । मानिसजस्तो जटिल प्राणीलाई युक्तिपूर्ण ढंगले काममा लगाउने शिक्षा दिने विषय व्यवस्थापन हो । यसकारण व्यवस्थापन विषयको अध्ययन पछि रोजगारीका लागि मात्र नभएर स्वरोजगारीका लागि पनि व्यवस्थापनबाट धेरै ज्ञान पाउन सकिन्छ । व्यवस्थापनमा अंग्रेजी, नेपालीसँगै अर्थशास्त्र, व्यवस्थापकीय सिद्धान्त, होटल व्यवस्थापन, कम्प्युटर, ट्राफल्स् एन्ड टुरिजम्सलगयात विभिन्न विषय पढन पाइन्छ । यहाँ सैद्धान्तिकभन्दा व्यावहारिक (प्रयोगात्मक) अभ्यास धेरै हुन्छ । यसकारण विद्यार्थीले अध्ययनको दैरानमा धेरै प्रयोगात्मक कुरा सिक्न सक्छन् । यसकारण पनि पछिल्ला वर्षमा काठमाडौं उपत्यका लगायत मुलुकका प्रमुख सहरहरूमा व्यवस्थापन विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइन्छ ।
व्यवस्थापन पढेको विद्यार्थीका लागि व्यवसाय उत्तम क्षेत्र हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा मात्र होइन, कर्पोरेट र सरकारी क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेका लागि पनि व्यवस्थापन विषय राम्रो मानिन्छ । ती कम्पनीले कर्मचारी भर्ना गर्दा पहिलो प्राथमिकता व्यवस्थापन (एमबीए, बीबीए, एमबीएस, बीबीएस) पास गरेका विद्यार्थीलाई नै दिने भएकाले जागिरको सम्भावना बढी देखिएको हो । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीमा विषयगत ज्ञानका साथै नेतृत्व लिने र प्रस्तुतीकरण क्षमता निकै बढी हुने भएकाले काम लगाउन सजिलो हुने बैंकरहरू बताउँछन् । व्यवस्थापन वाणिज्य, व्यवसाय र बिमासँग सम्बन्धित विषय भएकाले बैक तथा वित्तीय संस्थामा बढी उपयोगी हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि उपयोगी हुने खालको पाठ्यक्रम र इन्टनसिपमा आधारित शिक्षा हुने भएकाले प्रयोगात्मक ज्ञान बढी हुने उनीहरूको भनाइ छ । व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थी जोसिलो, कामलाई सम्मान गर्ने, काममा एकाग्रता, जिम्मेवारी राम्रोसँग बहन गर्नेलगायत गुण विद्यार्थीमा पाइन्छ । उनीहरूमा सैद्धान्तिकसँगै कार्यदक्षता धेरै राम्रो हुन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी रूपमै आकर्षण देखिएको सीजी एजुकेसनका एकेडेमिक हेड भूषण गुरुङले बताए । व्यवस्थापन विषय आफैंले उद्यमी विकास गर्ने नभए पनि उद्यमशीलातका लागि आवश्यक ज्ञान दिने उनको भनाइ छ । बिमा कम्पनीहरूका लागि व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विद्यार्थी नै बढी उपयोगी हुने बताइएको छ । व्यवस्थापन परेका विद्यार्थीहरूको वाणिज्य र व्यवसायसम्बन्धी जानकारी, कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण र क्षमता प्रदर्शन राम्रो हुन्छ । तुलनात्मक रूपमा यी विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा नेतृत्व लिने र प्रस्तुतीकरण क्षमता बढी गुरुङको धारणा छ ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र बिमा कम्पनीमा व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीको माग धेरै बढेको व्यवस्थापन विषयका कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन् । एमबीएमा विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकसँगै प्रयोगात्मक शिक्षा पनि दिइन्छ । व्यवस्थापनका धेरैजसो विषयमा ५० देखि ६० प्रतिशत पाठ्यक्रम प्रयोगात्मक हुन्छ । यसकारण व्यवस्थापन अध्ययन गरेका विद्यार्थीमा दैनिक कामकाज सञ्चालन, क्रेडिट व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापनको राम्रो ज्ञान हुने उनीहरूको ट्रिटन कलेजका व्यवस्थापन विभाग संयोजक कमानसिंह आरसीले बताए । ‘पाठयक्रम नै बढी व्यावहारिक र प्रयोगात्मक हुने भएकाले विद्यार्थीको एटिच्युड र लिडरसिप विकास राम्रो हुने’ उनको भनाइ छ ।
व्यवस्थापन विषयको प्रमुख उद्देश्य नै व्यवस्थापक उत्पादन गर्ने भएकाले नेतृत्व विकास र व्यवहार विकासमा जोड दिइने आरसीको भनाइ छ । यसकारण वित्तीय संस्था, बिमालगायत सेवाप्रदायक कम्पनीका लागि बढी उपयोगी हुने उनले बताए । व्यवस्थापन अध्ययन गरेका जनशक्तिको माग बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभएर कर्पोरेट क्षेत्रमा पनि रहेको उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् । विषयगत ज्ञान भएका विद्यार्थीलाई सोही विषयसँग सम्बन्धित काम दिदाँ ‘पर्फमेन्स’ राम्रो हुने भएकाले वित्तीय व्यवस्थापन, मार्केटिङलगायत काममा व्यवस्थापन अध्ययन गरेका श्रमशक्ति बढी उपयोगी हुने उनीहरूको धारणा छ । नेपालमा व्यवस्थापन विषयलाई बैंकिङ क्षेत्रसँगै जोडेर हेर्ने गरिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास त्यस्तो नभएको नेसनल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले बताए । ‘बैंकिङ क्षेत्र रकेट साइन्सजस्तो पनि होइन, व्यवस्थापन पढेकाले मात्र गर्नुपर्ने,’ उनले भने, ‘रुचि र चाहना भएका तर अरू विषय पढेकाले यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् ।’